Ọ bụ n'ezie "Social" Media? | Martech Zone
Enwere m ndị enyi 36 Facebook, Njikọ 122 na LinkedIn, Ndi otu 178 na m MyBlogLog obodo, di na nwunye iri na abuo na MySpace, ihe dika ndi enyi 60 na Yahoo! Ozi ozugbo, 20 na AOL Instant Messenger na onye 951 kpọtụrụ na Plaxo! Anọkwa m na Ahịhịa, MyColts.net, Jaiku, Twitter na m na-agụ banyere iri na abuo enyi blọọgụ (n'etiti 300 ma ọ bụ otú ndị ọzọ faili ntanetịime m na-anakọta ma nyochaa).
Ihere na-eme m ịgwa ndị mmadụ na m nwere akaụntụ threentanetị atọ… ọ bụghị otu. Ekwentị m ejikọrọ, ejiri ụlọ m, na m nwere akaụntụ T-Mobile maka nnweta site na Starbucks and Border (ebe m do zute ndị enyi). Enwekwara m ya na ọrụ, n'ezie. Nwere ike ịchị ọchị, mana o nwere ike ịbụ na ị ga-arụ ọrụ n'otu ọkwa n'ime afọ ole na ole, kwa. Ọ na - eme ka ọ bụrụ ọrụ m na ntụrụndụ m.
Nyere ndị niile na-elekọta mmadụ media na m bụ akụkụ nke, m n'ezie na-elekọta mmadụ?
M na-agwa ụfọdụ ndị ọkachamara na-ere ahịa na-abaghị uru ụbọchị ọzọ ma agbalịrị m ịkọwa Nke abụọ Life ka ha. Gbalịa ịkọwa Ndụ nke Abụọ ka ị bipụta ndị ọkachamara n'ahịa mgbasa ozi na ị nweghị ike inye aka mana ị nwere ụfọdụ chuckles na snickers. N'ikpeazụ, mmadụ kwuru, sị:
“Nke a adịghị m ka mmekọrịta mụ na ya. Ọ na-ada ụda na-emegide mmekọrịta mmadụ na ibe ya. ”
Nkọwa nke Onwe: Ndụ nke abụọ bụ n'ezie ọkwa nke uber-geekdom nke m na-anaghị achọ inweta. Enwere m ihe ịma aka zuru oke na Ndụ M nke Mbụ karịa ịrụ ọrụ na nke abụọ.
Echere m na ọ nwụọla. Nke a abụghị mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Ndị na-elekọta mmadụ chọrọ ihe karịrị ikiri, ịgụ ma ọ bụ ịge ntị… enwere ịmata asụsụ ndị mmadụ, ịma mma, imetụ aka, isi smell naanị ile anya n'anya ha.
Mgbe ụfọdụ, mgbe m na-arụsi ọrụ m ike, nwa m nwanyị ga-abanye na kọmputa ahụ n'azụ m (n'ụzọ nkịtị 6 nịpụ) na IM me… “Ndewo Papa! lol ”(ọ dị afọ 13). M na-agakarị na-amalite na-achị ọchị… ọ pụtara na m na na na na na na kọmputa na ogologo oge na mkpa na-emefu oge ụfọdụ n'ebe nlere. Obi dị m ụtọ, ọ ga-agbatị onwe m n'oche m wee bugharịa m ruo mgbe m si na laptọọpụ ahụ pụọ. Enwere m obi ụtọ inwe onye na-eche banyere m nke ukwuu ime nke ahụ.
Na 2000, a enwe na-achịkwa otu ogwe aka site na Internetntanetị. Ugbu a, e nwere ọbụna mmalite, na-akpọ Nọmba, nke na-arụ ọrụ iji jikọta ọgụgụ isi na ọgụgụ isi mmadụ.
Nke a na-amalite ichetara m ndị Telosi na ihe mbụ Star Trek. Ha bụ ndị jọgburu onwe ha nwere isi buru ibu nke ga-eme ka ndị mkpọrọ bụrụ ndị mkpọrọ site na ịmepụta echiche efu na isi ha telepathically. (Gwa m na ị chetara nke ahụ.) merenụ, "Ogige". Ọ bụ tupu Shatner ọbụlagodi! Onye ọkwọ ụgbọ ala kachasị ọnụ na NBC).
Anyị na - ejikọ naanị ya na ọrụ, mgbe ahụ n'ụlọ, ugbu a na ekwentị anyị… ụbụrụ ọ na - esote? Ànyị ga-ebi ụdị ndụ ọ bụla na mpụga Ntanetị? Ọ na-atụ ụdị ụjọ, ọ bụghị ya?
O doro anya, ọ bụrụ na anyị nwere ike ijikọ site na ụbụrụ na Internetntanetị, chee echiche ọsọ ọsọ anyị nwere ike ide ma tinye koodu. Enwere m ike iwulite ulo oru ugbo na-eji paịfị kọfị na pizza a na-amịpụta site na tubes afọ wee wuo Otu Ndụ Ise Ndụ. (Ebe dị n’etiti ndụ mbu na nke abụọ).
Ọ naghị ada ụda na mmekọrịta m na, ma. Achọrọ m ịpụtakwu.
PS: Kedu ihe ị chere na akaụntụ Brain 'Net ga-agba ọsọ?
Jun 19, 2007 na 9: 36 PM
Oge a ọ bụ oge ọjọọ ịgwa gị na ị gbaghara nnukwu egwu na Lawn na abalị Fraịde, ma ọ bụ oge dị mma iji chetara gị na agbaghara ọnụnọ gị? Jisie gị na gị unplugging mgbe ụfọdụ. O jeworo m ozi nke ọma. Enwere m ike inwe ntakịrị ihe ọmụma mana enwere m mmetụta na mụ na ndị mmadụ na-akpakọrịta.
Jun 19, 2007 na 10: 00 PM
Na-efu egwu nkiri Friday sitere n'ike mmụọ nsọ post a, Julie! 🙂
Jun 20, 2007 na 3: 40 PM
Gbanyụọ ekwentị gị site n'oge ruo n'oge.
Gbanyụọ email site n'oge ruo n'oge.
Gaa lee ugwu na oke ohia na oke osimiri!
Enweghị mkpa maka Ndụ nke Abụọ, mba, thx!
Enwere m teknụzụ zuru ezu na m ndu mbu ugbu a! 🙂